MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): April 2006
Mobile Desktop ကွန်ပျူတာ သုံးကြဦးမလားဗျို့ ...
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:20 am
မာလာ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ ... ဘယ်သွားမလဲ...
Myanmar ICT Week 2006
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:11 am
Myanmar ICT Week 2006 ကို မနေ့ကစပြီး မေလ (၄) ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်... ပြပွဲများကို တပ်မတော်ခန်းမမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဟောပြောပွဲများကိုတော့ Myanmar Info-Tech မှာကျင်းပနေတယ်လို့ သိရပါတယ်...
The Fifth Myanmar ICT Week 2006, Seminar & Workshop
13:00 - 14:30 Microsoft Visual Studio 2005 U Zaw Moe Tun
14:30 - 16:00 Windows Application Daw Kay Thwe Soe
16:00 - 17:00 Smart Client Application U Win Htein Win
13:00 - 14:30 Web Application Daw Lae Mon Win
14:30 - 16:00 Web Services U Tin Htut Htut Naing Oo
13:00 - 14:30 A Study on Linux U Wai Lin Kyaw
14:30 - 16:00 Embedded Track in OSS U Nay Lin Than
13:00 - 14:30 OSS and Intellectual Property Rights U Maung Maung Thant
14:30 - 16:00 Development & Customization of OSS U Ye` Yint Win
13:00 - 14:30 Internet for Everyone U Ye Tun Aung
***Place : : Room (205), Main Building, Myanmar Info-Tech
Happy Birthday Ko Myo Kyawt Myaing!
ဒီနေ့ ကျတော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကိုမျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့မွေးနေ့ပါ...
ပျော်ရွှင်တဲ့မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ကျတော် ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျား...
ကျတော်တို့အတွက် အသစ် အသစ်တွေကိုလည်း ဆက်လက် ဖန်တီးပေးပါဦးခင်ဗျား...
ပူးပျင်းလှတဲ့ မန္တလေးနွေမှာ မိုးကို တောင့်တနေသူများအတွက် မိုးမင်းကြီးက မနေ့ညက မိုးများကို အားပါးတရရွာသွန်းပေးပါတယ်... အေးတော့ အိပ်လို့ကောင်းသလား မမေးနဲ့ဗျို့... ခုချိန်ထိလည်း ဆောင်းတွင်းလိုပဲ အေးတုန်းပဲနေတုန်းပဲဗျို့... နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းပါပေပေ့...
ဘာဖြစ်လို့များပါလိမ့်လို့... နေတစ်မှာ ကိုမင်းအိုရေးထားတဲ့ မာလာဆိုတဲ့ ဟာကြောင့်မို့ကိုး....
မာလာလို့ အမည်ရတဲ့ ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းတစ်ခုဟာ လာမယ့် ၂၄နာရီအတွင်းမှာ ရခိုင်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကို ဖြတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်...။ အခုတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ကမ်းရိုးတန်းဒေသတချို့ကို စတင်ဖြတ်ကျော်နေပြီ ဆိုပါတယ်...။ မုန်တိုင်းရဲ့ ဗဟိုနားမှာ တစ်နာရီမိုင် (၁၅၀)ခန့် တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့...။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ မုန်တိုင်းဒီရေဟာ (၈)ပေကနေ (၁၂)ပေလောက်အထိလည်း တက်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့...။
MgHla's short CV
Posted by MgHla မောင်လှ at 2:36 pm
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး... လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်တုန်းက တင်ခဲ့ဖူးတာပါ... ပြင်ရမှာ ပြင်းလို့ ဒီအတိုင်းပြန်တင်မယ်ဗျာ...
. . . ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ် အခြားလူများမှ ၀င်ရောက်စွပ်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ ကူညီတတ်သော လုပ်ငန်းခွင် ၊ ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းပုံစံနှင့် လစာကောင်းသော အလုပ်တစ်ခု လိုချင်ပါသည် . . .
ရာထူး - ကြိုက်တဲ့ ရာထူးပေးပါ . . . (ရာထူးအရေးမကြီးပါ)
၁ - Graphic Design
၂ - Microsoft Platform Software installation (Win 3.x to Win 2003 Server & Application Softwares)
၃ - Networking Installation & Administration (လက်ရှိ ရုံးတွင် PC အလုံး ၃၀ ခန့်ပါဝင်သော Network နှစ်ခုကို အဆင်ပြေအောင် administration လုပ်ပေးနေ )
၄ - စာလည်း သင်တတ်ပါသည် . . . (အရင်အလုပ်က ကွန်ပျူတာ စင်တာ တစ်ခုက ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ ဆရာပါ . . . IDCS အတန်းများမှာလည်း စာသင်ဖူးပါသည်)
၅ - Computer Programming နည်းနည်းပါးပါးရ . . .
အခုလက်ရှိ နေ့တိုင်း သုံးနေသည့် Software များ - Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, Adobe Photoshop, PageMaker, Corel Draw, VB, Mapsource, MapInfo & ....
လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ - (၉) နှစ်ကျော်ရှိ . . .
လစာ တစ်လကို ဘယ်လောက်လိုချင်သလဲဆိုတော့ - USD 250 ၀န်းကျင် (မန်းလေးမှာပဲ အလုပ်လုပ်ချင်သည် . . . ကျတော့် အမျိုးသမီးကို အိမ်မှာပဲ နားနားနေနေပြီး မိဘများကို လုပ်ကျွေးချင်လို့ပါ)
အိမ်ရှေ့မင်းသွား တောလား ဓာတ်ပုံများ - ၂
မန္တလေးမှာ တစ်လ အတွက် လစဉ်ကြေး ကျပ် ၁၀၀၀/- စီ ပေးသွင်း စုဆောင်းကြတဲ့ “မေတ္တာမြေ” အမည်နဲ့ စေတနာရှင် လူမှုရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ထားပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့က မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သောအဖွဲ့များ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆွံ့အ နားမကြား ဝေဒနာရှင် ပြုစု စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းများနဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့သူများ-မသန်စွမ်းသူများ ပြုစု စောင့်ရှောက်သူများကို စေတနာရှင်တွေ ပါဝင်စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေထဲက ခွဲဝေ လှူဒါန်း ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၆၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်အထိ စုဆောင်းငွေကျပ် ၇ သိန်းကျော်ရှိနေပြီး ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းလိုသူတွေ ဦးသန်းဌေး၊ ဖုန်း- ၀၂-၃၂၀၆၈ (မန္တလေး)နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆန်ဈေးနှုန်းအဆမတန်တက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ စေတနာ၊
၀န်ထမ်းများ၏ တုံ့ပြန်မှုများအပေါ် ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စီမံချက် အောင်မြင်မှုကို ထိခိုက်စေရန်ကြံရွယ်၍ တစ်ခုခုလုပ်လျှင်
ယင်းသို့ဖြစ်စေရန် အကြောင်းရှိသောအမှုကိုပြုလုပ် လျှင် ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ်သော်လည်းကောင်း၊
နှစ်ရပ်လုံးအားသော် လည်းကောင်း ထိုက်သင့်စေရမည်။
Myanmar Gold Price List 18-Apr-06 to 21-Apr-06
၁၆ ပဲရည် ရွှေဈေးနှုန်းတွေပါ....
18.4.2006 454000 461000
19.4.2006 469000 479000
20.4.2006 504000 519000
21.4.2006 489000 494000
အိမ်ရှေ့မင်းသွား တောလား ဓာတ်ပုံများ - ၁
ဇလုံနဲ့ မတူဘူးဆိုပဲ... ဒါပေမယ့် ဇလုံလို သုံးလို့ ရတယ်တဲ့...
အိမ်ရှေ့မင်းသွား တောလား - ၁
Posted by MgHla မောင်လှ at 1:49 pm
ရေးရတာပျင်းလို့ ဦးထိပ်နဲ့ ပုဂံနပ် ရေးတာ တင်လိုက်တယ်ဗျို့...
ပျော်ပျော်ပါးပါးသွားခဲ့ကြပါတယ် . . .
ကျွန်တော် (ဦးထိပ် (ခ) နေမျိုးနွယ်)
ငွေနှင်းမြူ အားလုံး ၇ယောက် သွားခဲ့ကြတာပါ . . .
ကိုဂျေ အိမ်မှာ အားလုံးလူစုပြီး နေ့လယ်ပိုင်းမှာ
ဆိုင်ကယ် ၄ စီးလူက ၇ယောက်ပေါ့ ...
လမ်းမှာ ဆီထည့် လေဖြည့်ရင်းနဲ့၁နာရီလောက်မှာတော့
ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ် . . . .
ထန်းရေ တစ်မြူမှာပြီး သူရဲကောင်း ရွေးရာမှာတော့
သုံးယောက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် . . .
သူရဲကောင်းကြီး သုံးဦးက ထန်းရေတစ်မြူ ကို
သောက်ခဲ့ကြပါတယ် . . . ကြွက်ကြော်၂ကောင်နောက် ပဲလှော်ကြော်သုတ်ဝယ်လာခဲ့တဲ့
မုန့်တွေ ထုတ်လို့ စားကြ သောက်ကြပေါ့ ...
စကားတွေလဲပြောစားလဲစားသောက်လဲသောက်နောက်ရိုက်လဲရိုက်ကြတယ်ဗျ . . .
ပြောသွားကြတယ်။ ကိုမောင်လှ ဦးထိပ်
ထပ်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ... ။ သြော်...
(ဦးထိပ်ရေးထားတဲ့ အထဲက ရိုက်တယ်ဆိုတာ
ဓါတ်ပုံပြောတာဗျို့.. ဒီလူကြီး ထည့်ပြီး ရှင်းမသွားတဲ့အတွက် ရှင်းလိုက်ရတာ)
ရိုက်တယ်ဆိုတာဓာတ်ပုံပါ . .
ပထမပိုင်းတော့ဖျာနဲ့ ထိုင်လို့ နောက်
ပြောင်းထိုင်ကြတယ်လေ . . .
ထန်းရေက တစ်မြူ ကြွက်ကြော်က နှစ်ကောင် ကိုမောင်လှ (ဦးထိပ်
မောင်ရမ်းယူလာတာ) ယူလာတဲ့ ၀ိုင်နီက
သူရဲကောင်းက ၃ယောက် ၀ိုင်သာယူလာတယ်ဝိုင်ဖောက်တံက
၀ိုင်ပုလင်းကို ဆိုင်ကယ်သော့နဲ့ ရအောင်ဖွင့်ဆိုင်က
ဓားနဲ့ ထိုးကလော်မရတော့ ဆိုင်ကယ်သော့နဲ့ ရသလောက်ဖဲဖဲ ပြီး ဖွင့်မရ ရအောင်
အားလုံး ကြိုးစားတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ၀ိုင်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသား ...
၀ိုင်ပုလင်းထဲကို သော့တွေနဲ့ရအောင် နဲနဲချင်းဖော့ကိုထုတ်ပြီးနောက်ဆုံး ဖော့ကို ၀ိုင်ပုလင်းထဲ
. . ၀ိုင်အရသာက မေမြို့ဝိုင်လို
မကြိုက်ကြဘူးဖြစ်နေတာ . . . ၀ိုင်ကတော့ ကျွန်တော်ပဲ သောက်ဖြစ်တယ် ကျန်ရဲ့
သူရဲကောင်း ၃ယောက်ကတော့ တစ်မြူတည်းသော အိုးနဲ့ ကျေနပ်လေရဲ့ နောက်
တစ်မြူထပ်မှာပင်ကျရည် ချက်ချင်းတက်ခိုင်း မှာ အားလုံး ၃မြူဖြစ်ပေမဲ့
တကယ်သောက်ဖြစ်တာ တစ်မြူထဲပါဗျာကျန်တာတွေကစကားပြောနေတာနဲ့မသောက်ဖြစ်ပါဘူး အဲကုန်တာက ရေသန့်ဗျ ရေသန့်က ၃လုံး အားလုံး စကားတွေပြောလိုက်ကြာလေ . . . . .
ဦးထိပ်နဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေ ဆက်ရေးရင် ထပ်တင်ပေးမယ်ဗျာ... အမှတ်တရပေါ့... ဓာတ်ပုံတွေလည်း တင်ဦးမယ်ဗျာ...
Myanmar News? or Gossips?
Posted by MgHla မောင်လှ at 1:38 pm
ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်က ရွှေဈေး ၅.၃ သိန်းတဲ့...
Posted by MgHla မောင်လှ at 4:54 pm
Mandalay News -ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံး အသားများ၊ ဥများစားနိုင်ပြီ
ကြက်ငှက် တုတ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ရှိခဲ့တဲ့ မန္တလေးတိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာ ယင်းရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံး အသားများနဲ့ ဥများကို စားသုံးနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၆ ဧပြီလ ၁၇-ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ စာမျက်နှာ-၇ ပါ သတင်းအရသိရပါတယ်...
ကျန်မာသန်စွမ်းမှုရှိတဲ့ ကြက်သေ၊ ဘဲသေ၊ ငုံးသေများကို ၀ယ်ယူစားသုံးကြဖို့...
ကြက် ဘဲ အသားစိမ်းများကိုင်တွယ်တဲ့အခါ လက်အိတ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ကြဖို့... လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာဆေးကြောဖို့...
ပွက်ပွက်ဆူအောင် ချက်ပြုတ်ကြဖို့... (60ံC မှာဆိုရင် မိနစ် ၃၀ ခန့်၊ 100ံC မှာ ဆို ၂-မိနစ်ခန့် ချက်ပြုတ်လျှင် အန္တရယ်ကင်းကြောင်း) နှင့်
Nestle Coffee Black
စားသုံးရန် မသင့်တော်တော့တဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ နက်စ်ဘလက်ကို ထည့်ရတော့မယ် ထင်ပါ့... ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လအထိ နက်စ်ဘလက် တစ်ခွကို ၁၇၀-ကျပ်ပါ... သံပုရာသီး ဈေးတက်လို့ ဆိုပြီး ၂၀၀-ကျပ် ဖြစ်သွားလေရဲ့... သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ထိ ဒီဈေးပဲ... ဒီနေ့ သွားသောက်တော့ ၂၅၀-ကျပ်တဲ့... ကဲ နက်စ်ဘလက်ကို ဆိုင်များ၌ သောက်သုံးရန် မသင့်တော်သော စားသောက်ကုန် စာရင်းထဲသို့ အကျွန်ုပ် မောင်လှ ထည့်သွင်းလိုက်ပါပြီ...
ခု ဓာတ်ဆီထုတ်ပြီး ပြန်လာသည်... စိတ်အချဉ်ပေါက်လာသည်... ကျတော့် ဆိုင်ကယ်လေးမှာ အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ တစ်ဂါလန် (၄.၅လီတာ) မဆန့်ပါဘူး... ၄ လီတာလောက်ပဲ ဆန့်တာပါ... ဒါကို ပန့်ကိုင်တဲ့လူက ပန့်ကစားသလား မမေးနဲ့ ... ပန့်ကစားတဲ့အပြင် ၂ စိတ်လောက်ခိုးတယ်ဗျို့... ခါတိုင်းနေ့တွေ ၁ စိတ်လောက် ခိုးတာ ခိုးနေကြမို့ ခံသာသေးတယ်... ဒီနေ့ စိတ်အချဉ်ပေါက်လာတယ်... မကျေနပ်ဘူးဗျာ... မကျေနပ်လို့တိုင်လဲ... ဆိုင်မန်နေဂျာက အရေးမယူတဲ့အပြင် ရိုက်ထုတ်မှာစိုးလို့ တိုင်ပြီး အလကား ဖြစ်မှာ စိုးလို့ မတိုင်ခဲ့ဘူးဗျို့...
မောင်လှ သင်္ကြန်ပိတ်ရက် အင်တာနက်သုံးနိုင်မည် မဟုတ်သောကြောင့် ဧပြီလ (၁၈) ရက်နေ့မှ ပြန်ရေးမယ်...
Posted by MgHla မောင်လှ at 9:16 am
Posted by MgHla မောင်လှ at 3:56 pm
HtooEainThin.com Home Page Beta 0.03
Htoo Eain Thin Web site Home Page Beta 0.03 စန္ဒယားခလုတ် အဖြူရောင်များမှာ အသံထည့်ထား...
Posted by MgHla မောင်လှ at 1:40 pm
Posted by MgHla မောင်လှ at 8:21 am
Myanmar Forum (http://board.NativeMyanmar.com)
NativeMyanmar ကနေ ကူးယူလာတာဗျို့... ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်... Myanmar Language ဆိုပြီး ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ အထဲက ကောက်နှုတ်ထားတာပါ...
မြန်မာစာ မြန်မာစကား ဆိုလို့ပါ..။
ဟိုတစ်နေ့က ကိုယ့်သားလေး(၇.နှစ်ခွဲ ) ကို "အဘ ထက်သားတစ်လကြီး" ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးပြောမိပါတယ်..။ ပြန်ရှင်းပြနေလိုက်ရတာ နာရီဝက် လောက် ကြာသွားတယ်..။ ကလေးက သူတို့ကျောင်းမှာ အတန်းတွေ ခုန်ခုန်တက်သွားတာ..(၂)ခါတောင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးမျိုးပါ.. (ဆိုလိုတာက ဥာဏ်ရည်အနိမ့်စားကြီးထဲက မဟုတ်တဲ့ ကလေးမျိုးလို့ ပါ..) ဒါတောင် "စကားပုံ" ဆိုတာမျိုးကို .. ဒီလောက်လွယ်တဲ့ဟာလေးမျိုးကို တော်တော်ရှင်းယူလိုက်ရတော့ ..။(အဲဒါရဲ့အဓိပ္ပါယ်အပြင် စကားပုံ ဆိုတာ ဘာလဲ..ဆိုတာကိုပါထပ်ရှင်းနေရသေးတာ)
ကိုယ်တို့တွေ ငယ်ငယ်ကဆို ဒီလောက်အသက်အရွယ်ဆို ဒီလောက်လွယ်လွယ် စကားပုံမျိုး လေးငါးခု လောက်တော့ အနည်းဆုံး သိပြီးနေခဲ့ပြီ ထင်တာပဲ ..။
ဒီခေတ်ကလေးတွေမတော့ တခြား မီဒီယာတွေ က ယူနေစရာတွေများ.များလှတာနဲ့ပဲ ..
ဟာ တဲ့နေရာတွေကျတော့ ဟာ ကုန်ကြတာ..။ ကြာကြာနေရင် next generation
တွေ မြန်မာစကားပုံ တွေကို သိမှသိပါတော့မလား..လို့တောင် တွေးမိသွားတယ်..။
ခု ကိုယ့်သားလေးတွေကိုတော့ တစ်နေ့နှစ်ခုလောက် (ခပ်လွယ်လွယ်တွေက.စလို့ ) နည်းနည်းချင်း သွင်း.သွင်းပေးသွားမလား..လို့ ..။
4:34 PM me: http://www.htooeainthin.com/mghla/beta/ (New Link http://www.htooeainthin.com/beta.htm)
me: very poor flash design :(
4:45 PM me:စန္ဒယားခလုတ်ပေါ် ပွိုင့်တာရောက်ရင် ပေါ်မယ့် အသံ ဘယ်သူ့ကို တီးခိုင်းရမလဲ
4:46 PM zengans: amm
me: ကိုဂျေကြီးကို တီးခိုင်းရင်ရမယ်ထင်တယ်
zengans: မတူတဲ့ အသံနှစ်ခုပေါ့
me: ခလုတ်တစ်ခုကို တစ်ဖိုင်ထားရမယ်ထင်တယ်...
zengans: တစ်ခုကို တစ်ဖိုင်ဆို ဆိုဒ်နည်းနည်းပိုကြီးသွားမှာပေါ့
4:47 PM virtual keyboard software ကထွက်တဲ့အသံကော
me: ကဲ အနုပညာဆန်အောင်လုပ်ရင်... web page အဖြစ်ဘယ်လို ပြောင်းရမလဲမသိတော့ဘူး... ကောင်းရော...
4:49 PM zengans: ဟီးဟီး
me: ထူးအိမ်သင်ရဲ့ မ....ငယ် ဖိုးသားကို တွေ့ရင် ပြောလိုက်ပါဦး web page အဖြစ် မပြောင်းတတ်တော့ဘူးလို့
zengans: ဟား ဟား
အင်း .. ပြောလိုက်ပါ့မယ်
me: အန်နီမေးရှင်းမပါဘဲ ပုံအနေနဲ့ပဲ တင်ကြရအောင်လို့
5:28 PM me: ပြန်ပြီ
5:30 PM zengans: hote kae
Windows Live Mail join လုပ်ထားတာ ၂-ပတ်ကျော်ပြီ ... သတိရလို့ ၀င်ကြည့်တော့ဟော Windows Live Mail ကို သုံးလို့ရပြီတဲ့... ဘာတွေ ထူးလဲမသိ... ဒီမှာ ဘန်းထားတာဆိုတော့ ကျော်ခွ ၀င်ရတယ်ဗျ... မူလကမှ speed နှေးပါတယ်ဆိုမှ ကျော်ခွ ၀င်ရတော့ ပိုနှေးပြီပေါ့ဗျာ... နှေးလွန်းအားကြီးတာနဲ့ ဒီနေ့တော့ စမ်းကြည့်ရသေးဘူးဗျို့...
ဒါနဲ့စကားမစပ် ... Google AdScence စမ်းမလို့ လုပ်တာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့ နိုင်ငံထဲက ဖြစ်နေလို့တဲ့ အကောင့်ကို သုံးခွင့်မပေးဘူးဗျ... အဟီး ငိုချင်တယ်... ဒေါ်လှလေးဘာလေးများရမလားလို့...
Posted by MgHla မောင်လှ at 4:27 pm
တခါတလေ ငါ့စိတ်ဓာတ်ကြီး ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းလာအောင် သူတို့တွေ လုပ်ကြတယ်ကွာ...
ငါ့ရဲ့ စေတနာကို သူတို့တတွေ ဆော်ကားချင်ကြတယ်ကွာ...
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:21 am
ကျတော်တို့ မန်းလေး(မန္တလေးသားတွေ ပြောတဲ့အပြော)မှာ ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံက လွှင့်တဲ့ DreamTV အစီအစဉ်တွေကိုဖမ်းကြည့် လို့ရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ Dynasat ကထုတ်တဲ့ ၂-ပေ စလောင်းစက်လေးတွေကို အိမ်တိုင်းနီးနီးလောက်မှာ တပ်ဆင် အသုံးပြုကြတဲ့ဗျ... အဲဒီ စက်တွေက DreamTV ကို ခိုးကြည့်တဲ့ စက်လေးတွေပေါ့... အပြီးအစီးတစ်စုံမှ ၉-သောင်းကျပ် ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ရှိတော့ ကြည့်ပျော်တယ်ဗျာ... HBO, Star Movies, Star Chinese, Star World, Disney, CNN, BBC world, ESPN, Star Sport, ... စတဲ့လိုင်းတွေ ပါတယ်ဆိုတော့ ကြည့်ပျော်တယ်ပေါ့ဗျာ... လစဉ်ကြေး ၊ နှစ်စဉ်ကြေးလဲ ပေးစရာမလိုဘူးဗျ... ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေ ကုတ်ပြောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ပတ်လောက် စောင့်လိုက်ပါ... အဲဒီစက် ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက software အသစ်ထုတ်ပြီး ပေးတယ်ဗျ... တခါတလေ အခမဲ့ တခါတလေ ပိုက်ဆံပေးရတယ်ပေါ့ဗျာ... အဲဒီ အသစ်မရသေးတဲ့ ကြားကာလအတွင်းမှာ ကုတ် (key) ရိုက်ထည့်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီကီးကို ဒီမှာ သွားကြည့်လို့ ရတယ်ဗျ http://www.rdi-sat.com/f2/viewforum.php?f=2 ....
Posted by MgHla မောင်လှ at 7:51 am
ကျတော်တို့ မန္တလေးမှာ စီမံချက်ကာလ ပြီးဆုံးပြီး သကာလ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ် နတ်မင်းကြီးများကို ပသရင်ဖြင့် ၂၄-နာရီ မီးများလာကြောင်းပါ...
HtooEainThin.com 2006 Beta 0.02 Home Page
Posted by MgHla မောင်လှ at 4:12 pm
HtooEainThin.com 2006 Beta 0.02 Home Page ကို စမ်းသပ်လွှင့်တင်လိုက်ပါသည်... အလွန်တရာ ညံ့ဖျင်းလှသော Flash Designer မောင်လှ ဖန်တီးထားသည်... http://htooeainthin.com/beta.htm
for Htoo Eain Thin web site Home page (Ah Pyin Ah Pyay - 3.2 (အပျင်းအပြေ - ၃.၂))
Ah Pyin Ah Pyay - 3.2
Posted by MgHla မောင်လှ at 9:47 am
မေတ္တာမြေ မန္တလေးမှာ တစ်လ အတွက် လစဉ်ကြေး ကျပ် ၁၀၀၀/...
Mandalay News - သို့မဟုတ် အတင်း (သို့) စိတ်ထွက်ပေါ...
Mandalay News -ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံး အသားများ၊ ဥများစားနု...
MgHla & Flash (SOS, F1, Help me, Kal Kya Par, ကူညီ...
Mandalay News (ဟိုတယ်များ စည်းကမ်းချိုးဖောက်က ပိတ်...
for Htoo Eain Thin web site Home page (Ah Pyin Ah ...